Fundisa Abantwana Indlela Yokufumana Ulonwabo
Kutheni uYehova ‘enguThixo onoyolo’?
SONKE siyakufuna ukuvuya, akunjalo?— Kodwa uvuyo alufunyanwa ngabo bonke abantu. Ngaba uyazi ukuba kubangelwa yintoni oko?— Kungenxa yokuba abayazi imfihlelo yokufumana uvuyo. Bacinga ukuba bamele babe nezinto eziphathekayo ezininzi ukuze bafumane uvuyo. Kodwa nokuba sele bezifumene ezo zinto, olo vuyo aluhlali luhleli.
Nantsi eyona mfihlelo ibalulekileyo. UMfundisi Omkhulu wathi: ‘Kukho uvuyo olungakumbi ekupheni kunasekwamkeleni.’ (IZenzo 20:35) Ngoko ke, yiyiphi indlela esinokufumana ngayo uvuyo?— Enyanisweni, silufumana ngokupha nokwenzela abanye izinto. Ngaba ubukwazi oko?—
Makhe sicinge nzulu ngoku. Ngaba uYesu wayethetha ukuba umntu ophiwa izipho akavuyi?— Wayengathethi oko. Nawe uyakuthanda ukuphiwa izipho, andithi?— Bonke abantu banjalo. Siyavuya xa sifumana izinto ezintle.
Kodwa uYesu wathi sivuya nangakumbi xa sisipha abanye. Ngoko ungathi ngubani oye wapha abanye izinto ezininzi ngaphezu kwabo bonke abantu?— NguYehova uThixo.
IBhayibhile ithi uThixo “ubanika bonke abantu ubomi nempefumlo nezinto zonke.” Usinika imvula evela ezulwini nokukhanya kwelanga, ukuze kukhule izityalo size sifumane ukutya. (IZenzo 14:17; 17:25) Kungenxa yoko le nto iBhayibhile isithi uYehova ‘nguThixo onoyolo’! (1 Timoti 1:11) Ngoko ke ukupha abanye yenye yezinto ezimvuyisayo uThixo. Nathi siya kulufumana olo vuyo xa sisipha.
Yintoni enokukuvuyisa ngakumbi kunokuba uzityele onke amaqebengwana akho?
Ngoko ke, yintoni esinokubapha yona abanye abantu? Ucinga ntoni wena?— Kaloku izipho zisenokubiza imali. Ukuba eso sipho usithenga evenkileni, kuya kufuneka ukuba usihlawulele. Ngoko ukuba ufuna ukuthenga isipho esinjalo, kusenokufuneka wonge imali de yanele ukuze usithenge.
Kodwa asizizo zonke izipho ezithengwa evenkileni. Ngokomzekelo, xa kushushu kakhulu, amanzi abandayo anokuhlaziya gqitha. Ngoko xa uwapha umntu onxaniweyo, nawe uya kufumana uvuyo lokupha.
Kusenokwenzeka ukuba ngenye imini wena nomama wakho nibhake amaqebengwana. Kunokuba mnandi oko. Kodwa yintoni obunokuyenza ngamanye aloo maqebengwana enokukwenza uvuye ngakumbi kunokuba uwatye onke?— Kaloku amanye ubunokuwapha omnye wabahlobo bakho. Ngaba ungathanda ukukwenza oko ngenye imini?—
UMfundisi Omkhulu nabapostile bakhe balufumana uvuyo lokupha. Ngaba uyayazi into abayipha abanye abantu?— Yayiyeyona nto ibalulekileyo ehlabathini! Babeyazi inyaniso ngoThixo, yaye ngovuyo babelana nabanye ngezi ndaba zilungileyo. Oku bakwenza ngaphandle kokubahlawulisa imali ngoko babebapha kona.
Ngenye imini umpostile uPawulos nomhlobo wakhe, umfundi uLuka, badibana nebhinqa elithile elalifuna ukufumana uvuyo lokupha. Badibana nalo ngasemlanjeni. UPawulos noLuka baya apho kuba babeve ukuba yindawo yokuthandaza. Yaye ngokwenene, ukufika kwabo, bafumana abafazi abathile bethandaza.
UPawulos waxelela aba bafazi ngeendaba ezilungileyo ezingoYehova uThixo nangoBukumkani bakhe. Omnye wabo yayinguLidiya, yaye wanikela ingqalelo engakumbi. Emva koko, uLidiya wafuna ukwenza okuthile ukubonisa ukuba wayezithanda ezo ndaba zilungileyo azivileyo. Ngoko wabongoza uPawulos noLuka esithi: ‘Ukuba nindibona njengomntu othembekileyo kuYehova, ngenani endlwini yam nize nihlale.’ Yaye wabacenga ukuba baye kwikhaya lakhe.—IZenzo 16:13-15.
Uthini uLidiya kuPawulos noLuka?
ULidiya wayevuyiswa kukufika kwaba bakhonzi bakaThixo kwikhaya lakhe. Wayebathanda kuba bamnceda wafunda ngoYehova noYesu nangendlela abantu abanokuphila ngayo ngonaphakade. Kwamvuyisa gqitha ukulungiselela uPawulos noLuka ukutya nendawo yokuphumla. Ngoko isenzo sokupha sikaLidiya samvuyisa kuba wayekufuna ngokwenene ukupha. Leyo yinto nathi esimele siyikhumbule. Omnye umntu usenokuthi masinike omnye isipho. Kodwa ukuba asikwenzi ngokuzithandela oko, ukumnika eso sipho akuyi kusivuyisa.
Kutheni uLidiya ekuvuyela ukunceda uPawulos noLuka?
Ngokomzekelo, kuthekani ukuba ubunelekese yaye ufuna ukuyitya? Ukuba bendinokuthi kuwe qhekezela omnye umntwana, ngaba ubuya kukuvuyela ukumnika?— Kodwa kuthekani ukuba ubunelekese uze udibane nomhlobo wakho omthanda kakhulu? Ukuba ubuzicingele ngokwakho ukuqhekezela umhlobo wakho, ngaba bekungayi kukuvuyisa oko?—
Maxa wambi siye sithande umntu kangangokude sifune ukumnika yonke into size singasali nanto. Njengoko lusiya lukhula uthando lwethu ngoThixo, simele sivakalelwe ngaloo ndlela Ngaye.
Kwakutheni ukuze eli bhinqa lilihlwempu livuyiswe kukunikela ngako konke elalinako?
UMfundisi Omkhulu wayesazi elinye ibhinqa elilihlwempu elalivakalelwa ngaloo ndlela. Walibona etempileni eYerusalem. Lalineengqekembe ezimbini ezincinane nje kuphela. Kodwa lazifaka zombini ebhokisini njengomnikelo, okanye isipho, etempileni. Akukho mntu wayelinyanzele ukuba lenze oko. Abantu abaninzi ababelapho abazange bakwazi nokukwazi oko likwenzileyo. Lakwenza kuba lalifuna yaye limthanda ngokwenene uYehova. Lakuvuyela ukupha.—Luka 21:1-4.
Zininzi iindlela esinokupha ngazo. Ngaba zikho ocinga ngazo?— Ukuba sipha kuba sifuna ngokwenene, siya kuvuya. Yiloo nto uMfundisi Omkhulu esithi: “Ziqheliseni ukupha.” (Luka 6:38) Ukuba senjenjalo, siya kubavuyisa abanye abantu. Yaye siya kuba ngabona bavuyayo!
Masifunde ngakumbi ngendlela ukupha okulubangela ngayo uvuyo, kuMateyu 6:1-4; kuLuka 14:12-14 nakweyesi-2 kwabaseKorinte 9:7.
Ukupha Abanye Kwenza Uvuye